Testosteron phenylpropionate vovoka Fambolena sy mpanome - orinasa
Ny fitsipika mifandraika amin'ny toetr'andro izay sokajiana ho steroid anabolic androgenic, Testosterone phenylpropionate Powder dia fitsipi-pitenenana ara-analyse izay sokajiana ho steroid anabolic androgenic. Ity vokatra ity dia natao ho an'ny fikarohana sy ny fangatahana fitsarana.
Raw Testosteron phenylpropionate vovoka (1255-49-8) horonan-tsary
Raw Testosteron phenylpropionate vovony (1255-49-8) Famaritana
Raw Testosteron phenylpropionate vovony dia synthetic anabolic-androgen steroid (AAS) ary androgen ester - manokana, ny C17β phenylpropionate ester of testosterone - izay namidy taloha tao Romania.
Ity fanafody ity dia ampiasaina amin'ny lehilahy izay tsy ampy ny voajanahary voajanahary antsoina hoe testosterone. Amin'ny lehilahy, testosterone dia tompon'andraikitra amin'ny andraikitra mahazatra, anisan'izany ny fivoarana sy ny fivoaran'ny taova, ny hozatra ary ny taolana. Manampy amin'ny fitomboan'ny fivoarana ara-dalàna (fahamaizinana) amin'ny ankizilahy ihany koa izany. Ny testosterone dia anisan'ny kilasin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe androgens. Miasa amin'ny fiantraikany amin'ny rafitra maro izy mba hahafahan'ny orana mamolavola sy miasa amin'ny ankapobeny.
Ny testosterone dia mety ampiasaina amin'ny ankizilahy kely ihany koa mba hahatonga ny fahamaotiana ho an'ireo izay manana fahantrana. Azo ampiasaina koa izy io mba hanasitranana karazana homamiadana sasany amin'ny vehivavy.
Raw Testosteron phenylpropionate vovony (1255-49-8) Specifications
Product Name Raw Testosteron phenylpropionate vovoka
Anarana simika Retandrol; Testosterone 17-phenylpropionate; Testosterone hydrocinnamate; Testosterone phenpropionate
molekiolan'ny Formula C28H36O3
molekiolan'ny Wvalo 420.593 g / mol
Monoisotopic Mass 420.266 g / mol
mitsonika Point 115-116 ℃
fampiharana Anôry, bodista
Inona no atao hoe vovony Test Test phenylpropionate (1255-49-8)?
Ny testosterone phenylpropionate dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny zava-mahadomelina mifototra amin'ny toeram-pitsaboana Sustanon, izay ahitana fitiliana testosterone efatra (testosterone phenylpropionate, propionate testosteron, testosterone isocaproate ary testosterone decanoate) ary natao mba hanomezana fanafody tsy tapaka ho an'ny rà. . Ity fitsangatsanganana ity dia ampiasaina amin'ny fitsaboana testosterone amin'ny lehilahy miaraka amin'ny fepetra mifandray amin'ny hogogonadisma voalohany sy faharoa, na fiterahana na azo, ary azo ampiasaina koa ho fitsaboana fanohanana amin'ny transsexuals amin'ny lahy.
Ahoana ny fatran'ny Testosteron Raw testosterone phenylpropionate (1255-49-8)
Ny testosterone Phenylpropionate Testosterone dia endrika famoahana haingana avy amin'ny testosterone, miteraka fitsaboana amin'ny hormone izay ankafizin'ny bodybuilders ho an'ny fitomboan'ny haavo haingana sy ny hery, fa ny tsy fahatomombanana dia ny tsy fahampian'ny gripa haingana ao anatin'ny herinandro vitsy taorian'ny fitsaharana.
Rehefa avy nitsidika ny Phenylpropionate ny Testosterone, dia mety ho niova fo ho estrogen roa sy Dihydrotestosterone (DHT). Ny Phenylpropionate Testosterone dia mitazona ny vokany amin'ny famporisihana ny fihazonana azota mitombo amin'ny tazakely. Ny Phenylpropionate Testosterone koa dia manandratra ny ambaratongan'ny fitomboana IGF-1 ao amin'ny tavy sy ny aty. Ankoatr'izany koa dia manana fahafahana hanangana ny asan'ny sela satelita izay manana anjara asa manan-danja amin'ny fanitsiana ireo voina voa mafy.
Ny testosterone Phenylpropionate dia mamehy ny mpandaha-teny syrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ny famporisihan'ny Androgen receptor (AR) dia mandrisika ireo rafitra AR maro mifandraika amin'ny tombony ho an'ny hozatra ankoatra ny fatiantoka mavesatra. Ny Testosterone Phenylpropionate koa dia mampihena ny hormones glucocorticoid catabolic ary hampitombo ny famokarana sela mena.
Raha miova fo amin'ny estrogen ny Testosterone Phenylpropionate, dia miteraka karazana fiantraikany mahatsiravina izay misy ny gynocomastia, ny fihazonana rano, fa ny DHT dia matetika ao ambadiky ny fihenan'ny volo, ny fihenam-bidy ary ny fampitomboan'ny prostaty. Ny vidin'ny Testosterone Phenylpropionate dia ambany noho ny fiverenana vao haingana teo amin'ny tsena mainty, ary ny avo lenta. Ny testosterone Phenylpropionate dia hitombo bebe kokoa amin'ny andro ho avy.
Raw Testosteron phenylpropionate vovony (1255-49-8) Fatra
Ny ankabeazan'ireo mpanao biriky / atleta dia nanaparitaka ny testosteron phenyl indroa isan-kerinandro na nandritra ny roa andro hafa. Ny doka mety ho an'ny lahy dia 300mg- 3000mg / herinandro. Ireo vehivavy mpanao fanatanjahantena dia tsy vonona hampiasa io zava-mahadomelina io noho ny fiantraikany mety hitranga.
Ny voka-dratsin'ny testosteron phenyl propionate dia latsaky ny esters testosterone, eto ny sasany amin'izy ireny: virilization, volo / vatana.
Raw Testosteron phenylpropionate vovony (1255-49-8) soa
Ny vovo-dronono ny testosteronephenyl dia zava-mahadomelina izay anisan'ny kilasy androgens. Io no iray amin'ireo singa ao Sustanon sy Omnadren. Ny vovo-dronono phenyl-propionate testosterone dia azo ampiasaina ho fitantanana. Ny famoahana dia manana fiainana mavitrika efatra ka hatramin'ny dimy andro. Azo ampiasaina irery izany na miaraka amin'ny esters hafa amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana amin'ny androgen amin'ny lehilahy miaraka amin'ny tsy fahampian'ny testosterone voamarina. Na izany aza, ny fampiasany malaza indrindra dia ny fampitomboana ny masomboly sy ny tanjaka. Ny toetra mampiavaka ny bodybuilders dia tokony hahafantatra momba an'io zavatra io dia ny vokatr'izany dia toa tsy dia mahalana loatra ny fihenan'ny rano. Ary amin'ny alalan'ny fanatrehana atleta phenylpropionate testosterone dia mitatitra ny fitomboan'ny faniriana, ny herisetra ary ny tanjaka. Amin'ny ankapobeny amin'ny fampiasana ity karazana testosterone ity amin'ny fomba mety dia toa mitovy amin'ny testosterone hafa ny vokany saingy tsy mitaky fotoana be dia be izany, ary tsy miteraka ny fitehirizana ny rano.
Ny fihetsika ankapobeny momba ny zava-mahadomelina dia mampiroborobo ny fahafaham-po amin'ny alàlan'ny libido miafina, ny tsy fahampian'ny hery, ny fampitomboana ny hozatra ary ny fihenan-tsakafo. Tsy voatery hampiasa dipoavatra ambony amin'ny testosteron-phenyl propionate noho ny fiantraikany mahery vaika amin'ny zava-mahadomelina. Ny androgenic / anabolic effects of the drug are dependent on the dosage administered. Ny atleta dia mihevitra fa ny dose avo kokoa, ny vokatra tsara kokoa, fa ny dosie avo kokoa dia midika ny lozam-pifanerena ambony mifandraika amin'ny voka-dratsin'ny aty. Ny testosterone phenyl propionate dia heverina fa hitondra vokatra tsara amin'ny fitomboan'ny isa voan'ny testosterone, mahazo hery sy hozatra. Noho ny fanentanana ny Receptors Androgen, ny vovobony ho an'ny phenyl-propionate testosterone dia mety miteraka haavo ara-batana, mihamatavy, manasatra ary mitombo. Koa satria ny vatany dia mitombo amin'ny ampahany haingana kokoa ny masombolony, ny sakafo entina dia mivantana mivantana mankany amin'ny tazomoka. Izany dia vokatry ny vokatry ny testosterone amin'ny fatiantoka matavy.
Mividianana vovoka Testosteron phenylpropionate avy amin'ny Buyaas.com
Rojo testosteron roja (58-22-0)